အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 25 Anchor Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
sonitattoo ဇူလိုင်လ 8, 2016
ကျောက်ဆူးတက်တူးတဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့အရာဆိုလို; တည်ငြိမ်ရေး။ တည်ငြိမ်မှုအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများတွင်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းတည်ငြိမ်နိုင်ပါတယ်နှင့်ဂုဏ်ယူစွာကြောင့်ချွတ်ဖေါ်ပြခြင်း၏တလမ်းတည်းနေတဲ့တက်တူးထိုးမှတဆင့်ကြောင်းဘဝများစွာကိုဒေသများရှိပါသည်။ #anchor တက်တူးများအသုံးပြုမှုသူတို့ဘဝတွေကိုအချို့အဆင့်တဆင့်ကူးမြောက်ရာ၏မရေမတွက်ပုံပြင်များပြောပြရန်များစွာသောလူတို့ကအသုံးပြုသည်။
ကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးခွန်အားနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသင်္ကေတကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သငျသညျရှေ့တျော၌ကျောက်ဆူးတက်တူးမြင်ပြီလော ဤသည် #tattoo ယင်းစူမီးရီယန်တို့ကဤမျှလောက်များစွာသောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးတက်တူးတဦးဖြစ်လာသည်နှင့်လည်းအစောပိုင်းခရစ်ယာန်များကအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့သည်မိမိတို့ယုံကြည်ချက်၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့ကြသောအခါဤဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောရေတပ်, အစွမ်းသတ္တိကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအဖြစ်သင်္ဘောသားအေဂျင်စီအတွက်ရေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုပါဝင်သည်,
1 ။ မိန်းကလေးရဲ့ခြေမအဘို့အေးမြသောကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, တက်တူးထိုးကျွန်တော်ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးကိုင်စွဲဖို့လာကိုမြင်လျှင်ဖြစ်ကြောင်းခေတ်မှီဖြစ်လာသည်။ ခန္ဓာကိုယ် inking နှစ်မျိုးရှိပါတယ်, အမြဲတမ်းနဲ့ယာယီဒီဇိုင်းများ။ သငျသညျဆုံးဖြတ်များအတွက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ အမျိုးသမီးများအတွက်လက်ကြောကျဆူးတက်တူးမင်စိတ်ကူး
အမြဲတမ်းတက်တူးထိုးတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းနှင့်အတူညှိုးနွမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အစွန်းရောက်ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူ မှလွဲ. ကွာခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေမသွားဘူးပေမည်။
3 ။ မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူပေါင်ကြောကျဆူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နစ်မခံပါနဲ့
4 ။ မိန်းကလေးများအဘို့အအံ့သြဖွယ်လက်ကြောကျဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
5 ။ နောက်ကျောယောက်ျားလေးများဘို့လက်ကြောကျဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းအယူအဆ၏
ယာယီတက်တူးကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါခြယ်ပစ္စည်းသာအရောင်ဟာအရေပြားအပေါ်ယံစွန့်ခွာထားတဲ့ပြင်အရေပြားအလွှာအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကဖယ်ရှားခံရသောအခါသင်သည်သင်၏အရေခွံဆဲလ်အချို့ကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါနားလည်သင့်တယ်။
6 ။ ရောင်စုံသေးငယ်တဲ့ပန်းပွင့်နှင့်အပေါင်ပေါ်ကျောက်ဆူးတက်တူးစိတ်ကူး
သူတို့တစ်တွေအချိန်တိုအတွင်းအတွင်းပြန်ကြီးထွားလို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖြစ်ကြောင်းအရေပြားဆဲလ်တွေအကြောင်းကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သင်ကသင်ကတာရှည်အဘို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုပေမည်ဘယ်အရာကိုဖြစ်ရလိမ့်မည်ဆိုပါကသေချာဒီတက်တူးထိုးရတဲ့စဉ်းစားသော်လည်းမနေတယ်ဆိုရင်, ယာယီဒီဇိုင်းအဘို့အသွားပါ။
7 ။ ယောက်ျားလေးများအဘို့ကျောက်ဆူးစွပ်အိတ်တက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
8 ။ တံတောင်ဆစ်မြို့အနီးကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
သင်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအဆုံးအဖြတ်လျှင်သင်တစ်ဦးတက်တူးထိုးလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ့်အလျင်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဤသည်တက်တူးထိုးအသုံးပြုသူများ၏ #idea နှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်သူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်တဲ့အနုပညာရှင်များကပြုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
9 ။ ယောက်ျားလေးများအဘို့အ Biceps ကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
သင်ကယာယီဒီဇိုင်းလျှင်နာကျင်မှုခံစားရမယ့်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်အစဉ်အမြဲနောက်ဆုံးမှမယ်လို့တစ်ဦးတက်တူးထိုးရလိုသောသူတို့အဘို့, သင်က၎င်း၏ဖယ်ရှားရေးစဉ်အတွင်းနာကျင်မှုသည်းခံရ၏ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
10 ။ ရောင်စုံသေးငယ်တဲ့ပန်းပွင့်နှင့်လက်တော်သည်ကျောက်ဆူးတက်တူးမင်စိတ်ကူး
ကအမြဲတမ်းတက်တူးဒီဇိုင်းနှင့်မတူဘဲယာယီ #design မှကြွလာသောအခါအသှေးကိုဆုံးရှုံးအကြောင်းကိုမေ့လျော့။
11 ။ လက်ပေါ်စုံတွဲတစ်တွဲကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများ
12 ။ မိန်းမများအဘို့အဝက်လက်ကြောကျဆူးတက်တူးစိတ်ကူးဖို့ပခုံး
ဒါဟာသို့သွားလေ၏သောအချိန်, အာရုံကိုပေးသည်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သင်တစ်ဦးတက်တူးထိုးဘို့အသွားကြသည်တဲ့အခါစဉ်းစားနိုင်တဲ့အရာအချို့ရှိပါသည်။ သငျသညျဤကဲ့သို့သောတစ်ခုအံ့သြဖွယ်တက်တူးထိုးကြတဲ့အခါသင်ပျော်စရာတွေအများကြီးရှိသည်။ ထိုသို့စဉ်းစားပါ။
13 ။ ခြေကျင်းပေါ်တွင်မိန်းကလေးများအဘို့အအသေးစားနှင့်ချစ်စရာကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
14 ။ လက်ပေါ်ရိုးရာ Anchor တက်တူး
သင်ကစကားလုံးပေါ်မှာရေးထားလျက်ရှိ၏ '' မိသားစု '' နှင့်အတူကဖြတ်ပြီးပျံ့နှံ့ဖဲကြိုးရှိပါတယ်တဲ့ကျောက်ဆူးတက်တူးကိုတှေ့မွငျနိုငျသညျ။ တစ်ခါတစ်ရံသငျသညျသူတို့အပျေါမှာအဖေသို့မဟုတ်အမေကိုရှာတှေ့နိုငျသညျ။ ဤစကားသည်ထိုသူတို့အဘို့ခွန်အားနှင့်နှောင်ကြိုးနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုများပုံဖော်။ သငျသညျထပ်ခါထပ်ခါကျောက်ကိုထိမှန်ပေမယ့်နေဆဲကလုပ်တဝိုက်သို့ရောက်လာသည်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ရနျလိုအပျထားတဲ့ကြောကျဆူးတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
15 ။ ရောင်စုံသေးငယ်တဲ့ပန်းပွင့်နှင့်ကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
16 ။ မိန်းကလေးများအဘို့အလက်ကောက်ဝတ်ကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
သင်တစ်ဦးကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးရတဲ့မတိုင်မီလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုကျောက်ဆူးအမျိုးအစားအပေါ်ကိုအနည်းငယ်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတက်တူးလူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်သောနေရာအများအပြားသောနေရာများရှိပါသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုး၏အရွယ်အစားသင်ကနေရာချခံရဖို့လိုတဲ့နေရာကိုအပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ်။ လက်ချောင်းများ၏ပင်ဘေးထွက်သင့်ရဲ့ကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးထားခဲ့ဖို့ပြီးပြည့်စုံရာအရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
17 ။ မိုးမခဒီဇိုင်းကွင်းဆွဲခြင်းနှင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မိန်းကလေးများအဘို့ကျောက်ဆူးတက်တူးစိတ်ကူး
18 ။ အမျိုးသမီးများအတွက်ရောင်စုံကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်စိတ်ကူး
19 ။ လက်ပေါ်အသေးစားစုံတွဲကျောက်ဆူးတက်တူးစိတ်ကူး
ကျောက်ဆူးတက်တူးများအသုံးပြုမှုတွင်လည်းအတူတကွအကွာအဝေးကြားဆက်ဆံရေးပေါင်းကူးလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုနှောင်ကြိုးနိုင်ပါတယ်; ဖြစ်ပျက်နှင့်မိသားစုအင်္ဂါတို့တွင်တစ်ဦးနီးကပ်နှောင်ကြိုးအကြောင်းကြောင်းကောင်းသောအရာခပ်သိမ်း၏သတိပေးချက်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
20 ။ မိန်းကလေးများအဘို့ကိုယျခန်ဓာကျောက်ဆူးတက်တူးစိတ်ကူး၏ဘေးထွက်
သင်တစ်ဦးတက်တူးအကြောင်းနားလည်တဲ့လူတစ်ဦးလျှင်, ကျောက်ဆူးတက်တူး၏အသုံးပြုမှုကိုသင်အသည်းအသန်လိုအပ်ကြောင်းကိုကြေညာချက်ပေးကမ်းခြင်း၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
21 ။ ငှက်နှင့်ခြေလျင်ပေါ်တွင်မိန်းကလေးများအဘို့ကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်စိတ်ကူး
သင်တက်တူးထိုးကြေညာချက်စေရန်မည်သို့ချင်ပါသလဲ? သင်တက်တူးကိုသုံးနိုင်သည်ရှိရာခြေကျင်း, လည်ပင်းနှင့်ပေါင်နဲ့တူသောနေရာများရှိပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
22 ။ လက်မောင်းပေါ်နှလုံးနှင့်ကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
သငျသညျအပွင့်, စကားလုံးများဒီဇိုင်းများနှင့်အခြားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်သင်၏တက်တူးထိုးရောနှောနေခြင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးကျောက်ဆူးနှင့်တကွကြွလာသောဒီဇိုင်းကိုတစ်ခုချင်းစီချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
23 ။ ပြန်မိန်းမတို့အဘို့ကျောက်ဆူးဒီဇိုင်းကိုတက်တူးထိုးစိတ်ကူးကိုင်ပြီးပျံတတ်သောငှက်
တက်တူးလူအများစုဤသည်နေ့ရက်ကာလအဘို့အသွားကြသည်သောအကြိုက်ဆုံးဖက်ရှင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာကြပါပြီ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုတခုတခုအပေါ်မှာကျောက်ဆူးတက်တူးနှင့်အတူလမ်းကြောင်းသစ်ထဲကမဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
24 ။ မက်ဆေ့ခ်ျကို, ဘယ်တော့မှမစုပ်နှင့်အတူကျောက်ဆူးတက်တူးစိတ်ကူး
25 ။ အမျိုးသမီးများအတွက်ရောင်စုံနွားသငယ်ကိုကျောက်ဆူးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
ပိုပြီး Anchor Tattoo ဒီဇိုင်းအဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ခြင်္သေ့သည်တက်တူးလက်မောင်းတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးကြောင်တက်တူးစိန်တက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးနေရောင်တက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးခြေလျင်တက်တူးKoi ငါးတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးငှက်တက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosပန်းချီတက်တူးrip တက်တူးဂီတတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးမျက်စိတက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးပန်းပွင့်တက်တူးလတက်တူးတက်တူးထနှလုံး Tattoosစုံတွဲတက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးလက်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးခြေကျင်း Tattoosအစ်မတက်တူးလက်တက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးရေဘဝဲတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများဆင်တက်တူးမြှားတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးFeather Tattooချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးဟင်္တက်တူးအသင်္ချေတက်တူးချစ်စရာတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်း